၂၃-၉-၂၀၁၂ တင်္ဂနွေ ညပြန်လည်ရယူမှုများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ၂၃-၉-၂၀၁၂ တင်္ဂနွေ ညပြန်လည်ရယူမှုများ
၂၃-၉-၂၀၁၂ တင်္ဂနွေ ညပြန်လည်ရယူမှုများ
Posted by ​မောင်​မိုဘိုင်း on Sep 23, 2012 in Copy/Paste |2comments
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ဘောလုံးဝါသနာရှင်ညီကိုများအားလုံး အရင်ညက ကျနော်မှန်းပေးခဲ့တဲ့ အဓီကသုံးပွဲအနက် ၀က်စ်ဘရွန်း တစ်သင်းသာ နဲနဲရခဲ့တဲ့အတွက် နစ်နာခဲ့ရတာတွေကို ပြန်လည်ရယူပေးမယ့် ဒီညပွဲစဉ်များကတော့
၄း၃၀ မာယော့ကာ – ဗလင်စီယာ
၅း၀၀ ဆမ်ဒိုးရီးယား – တိုရီနို
၇း၀၀ လီဗာပူး – မန်ယူ
၇း၃၀ အတ္တလန္တာ – ပါလာမို
။ ဘိုလော့နာ – ပါဆာကရာ
။ ကယ်ဂလီယာရီ – ရိုးမား
။ ကာတာနီယာ – နာပိုလီ
။ အင်တာ – ဆီနာ
။ အူဒီးနီးစ် – အေစီမိလန်
၈း၃၀ နယူးကာဆယ် – နော့ဝှစ်ခ်ျ
။ လီဗန်တေး – ဆိုစီဒက်
၉း၃၀ မန်စီးတီး – အာဆင်နယ်
။ စပါး – ကျူပီအာ
၁၀း၃၀ အက်သလက်တီကို – ဘယ်လာဒိုလစ်
၁၂း၃၀ ဘီဘာအို – မာလာဂါ
၁း၁၅ လာဇီယို – ဂျီနီုအာ
၂း၀၀ ဗယ်လ်ကာနို – ရီရဲလ်မက်ဒရစ်
(အရောင်ပြထားသော အသင်းများမှာ ကျနော်အကြိုတ် အသင်းများဖြစ်ပါတယ်) ယခုပွဲးစဉ်များအားလုံးထဲမှ အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်များကိုရွေးထုတ် ပေးရမယ် ဆိုရင်တော့ . . . ဆမ်ဒိုးရီးယား သရေဆိုရင်အရှုံးဆိုတဲ့ဈေးနဲ့ ဆမ်ဒိုးရီးယားကို တစ်ဂိုးအသာနဲ့ နိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းပေးပါရစေ။
ဒုတိယတစ်သင်းကတော့ မန်စီးတီး ၁+၄၀ ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ မန်စီးတီး ဟာအာဆင်နယ်ကို အနည်းဆုံးတစ်ဂိုအသာ ၂ ဂိုးအသာလောက်ပြတ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။
အက်သလက်တီကို ၂+၈၀ ဆိုတဲ့ ဈေးနှုန်းဟာ အရင်တစ်ပတ်က လာလီဂါပွဲစဉ်မှာ ဖွင့်ခဲ့တဲ့ဈေး နှုန်းနဲ့အတူတူပါပဲ အရင်ပွဲ ရလဒ် ၄-၃ တစ်ဂိုးပဲပြတ်ခဲ့ပေမယ့် ယခုထပ်မံဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဈေးနှုန်းက ၃ ဂိုးအသာရမှသာ အပြည့်အ၀ ရရှိမယ့်အနေအထားမို့လို့ အက်သလက်တီကို ၂ ဂိုးအသား အနည်းဆုံးလို့ ပြောပါရစေ။
နောက်ထပ်ထပ်မံ ရွေးချယ်ပေးချင်တာကတော့ ချန်ပိယံလိဂ်မှာ ပထမဆုံးပွဲ ပထမဆုံး အနိုင်နဲ့အတူ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွနေမယ့် မာလာဂါပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဘီလ်ဘာအို =၃၀ ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ ဖွင့်လှစ်လာခဲ့တဲ့အနေအထားအရ ဒီပွဲစဉ်ဟာ သရေပွဲဖြစ်ဖို့များပါတယ် အနိုင်ဆိုရင်တော့ မာလာဂါ တစ်ဂိုးအသာလောက်နဲ့ နိုင်သွားမယ်လို့ ခန့်မှန်းမိပါတယ်။
ဂိုးပေါင်းဝါသနာရှင်များအတွက် ကယ်ဂလီယာရီ – ရိုးမား ပွဲစဉ်မှာ ရိုးမာက သရေဆိုရင် ၂၀ ရှုံးမယ့်အနေအထားနဲ့ ဈေးဖွင့်ထားပေမယ့် ဂိုးပေါင်းမှာ ၃ ဂိုးသွင်းရင် ၂၀ အရှုံးပါတဲ့ ခင်ဗျာ ဒါကိုတော့ ဖော်မြူလာ နှစ်သက်သူ ၀ါသနာရှင်တိုင်း သိပြီးသားဖြစ်သလို နှစ်သက်ကြမယ့်လို့လဲ ထင်ပါတယ် ဂိုးပေါင်းအနည်းဆုံး ၃ ဂိုးရဖို့သေချာနေတာမို့ ဂိုးပေါင်းအပေါ်ပါ။ နောက်ထပ်ဂိုးပေါင်းတစ်ပွဲကတော့ အူဒီးနီးစ် – အေစီမီလန် ပွဲစဉ်မှာ အေစီမီလန်က သရေဆိုရင် ၁၀ အရှုံး မှာဂိုးပေါင်း ၂ ဂိုးဆိုရင် ၆၀ အရှုံးကို ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အတွက် ဘောဒီနဲ့ ဂိုးပေါင်းဟာ သဟဇာတ ဖြစ်လှပါတယ်။ သရေဆိုရင် ၁၀ ရှုံး ၂၀ ရှုံး အိမ်ကွင်းမှပေးပေး အဝေးကွင်းမှပေးပေး ဈေးနှုန်းမျိုးတွေဟာ သရေကျဖို့အတွက် ၇၀ ရာနှုန်း ၈၀ ရာနှုန်း ရှိတယ်လို့ပြောရမှာပါ ရလဒ်အနေနဲ့လည်း ၀-၀ . ၁-၀ . ၀-၁ . ၁-၁ အနေအထားများသာ များလေတာမို့ ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ အနည်းဆုံး ၆၀ ရမယ့် ဂိုးပေါင်းအောက် ကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
(ရိုးမားပွဲခန့်မှန်းချက်ကို ထပ်မံတင်ပြရရင် ရိုးမား =၂၀ အရှုံးနဲ့ သရေကျပြီး ဂိုးရလဒ် ၀-၀ . ၁-၀ . ၀-၁ . ၁-၁ ဖြစ်ဖို့များနေတဲ့ အနေအထားမှာ ဂိုပေါင်း ၃-၂၀ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဈေးနှုန်းဟာ ပရိတ်သတ်များကို လှည့်စားထားတဲ့ ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်သလို ဈေးဖွင့်လှစ်သူများအနေနဲ့ ဂိုးပေါင်း အနည်းဆုံး ၃ ဂိုးရမယ်လို့ သေချာထားလို့သာ ဒီဈေးနှုန်းကို ဖွင့်လှစ်ရဲ့တာဖြစ်ပါတယ်) ဘောလုံဝါသနာရှင်များ အားလုံးကို အရင်ညက ကျနော် ခန့်မှန်းပေးခဲ့ တာတွေကတော့ လာလာခြင်းစောက်ခုံး နဲ့ထွင်းသလိုဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ ဒီညပွဲစဉ်များကတော့ အရင်ညက အရှုံးများကို ပြန်လည် ရယူပေးမယ့် ပွဲစဉ်များဖြစ်တယ်လို့ တစ်ခါတည်ပြောလိုက်ပါရစေ။ အားလုံး အနိုင်ရလဒ် များနဲ့အတူ ရွင်လန်းနိုင်ကြပါစေ။
ဖတ်ရှု့ သွားပြီး..စောင့်ကြည့်မယ် ဗျိုး…ဘော်လုံး…ဝါသနာတူ..ညီအကိုတိုင်း..(…မယားကြီး..နားကပ်..ပြု့ပြင်ရေး..) အောင်မြင်ကြပါစေ
ကြိုက်တာက ဘိုလော့ဂ်နာ၊ နယူးကာဆယ်၊ အာဆင်နယ်